Storelọ ahịa ahụ na-ere ụdị t-shirts, ọsụsọ, denim, na akpụkpọ ụkwụ ndị a ma ama n'ụlọ. Ha ejiriwo ọnụnọ nkịtị mee ka ndị ahịa na-eleta ụlọ ahịa ahụ nwee ahụmịhe kachasị mma. Mpaghara ezumike nke nwere ikuku achọ na ezigbo foto nke ụlọ ọrụ denim ha na-agbakwunye na ebube ka ọ na-akwalite ụlọ ọrụ ika dị ka ụlọ ọrụ denim kacha ọcha n'ụwa.
Ka ị na-enyochakwu, ị nwere ike ịchọta mpaghara ngosi anọ nwere mpaghara ndenye ego dị iche. Ndị na-eje ozi ihe ngosi ahụ abụghị naanị ịre uwe, kamakwa na-enyere ndị ahịa aka ịlele ngwaahịa ngwa ngwa. Ha na-ewepụta ndụmọdụ ga-ahaziri nke ọma mgbe ha nyochara profaịlụ gị agbakwunyere na ntanetị ha.
N'oge na-adịbeghị anya, akara ngosi mara mma jikọtara ya na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ a maara nke ọma Rhea's Café, nke dị na San Francisco. Ndozi nke ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ iji daba na njirimara nke akara ahụ na pink nke otu puku afọ tiri mkpu ozi ahụ. N'oge na-adịghị ụlọ oriri na ọ restaurantụ wasụ ahụ ghọrọ etemeete ahụmahụ-ehiwe, ebe chefs esi nri nri dị n'azụ enyo na stacks nke ngwaahịa si Glossiers.